China Natural Cat inkunkuma Ukwenziwa kunye Factory | KwiBondhot
Uncedo lwenkunkuma yekati yeTofu ngaphezulu kwezinye iintlobo zenkunkuma
● Kukhuselekile kukhutshwa kwiimveliso zendalo ezenza ukuba kungabinabungozi ukuba zityiwa zizilo-qabane.
● I-Soft Touch-Made eyenziwe kwintsalela yeembotyi zendalo kunye nesitashi sombona kunye ne-Ultra-soft texture eyenza i-feline ngeepawula ezibucayi.
● Uthuli Simahla-luyanceda ukukhusela isilwanyana sokuphefumla ngezinto zaso zothuli.
● Ukufunxa okuphezulu kunye nokususa isisu- Ikhawuleza inyuse umchamo wekati kwaye iphazamise ivumba elomeleleyo kunxibelelwano.
● Ukulahlwa ngokulula- Iqokobhe ligungxula kakhulu kwaye linokuboliswa ziintsholongwane kwaye kulula ukulilahla kwindlu yangasese okanye egadini njengesichumiso.
● I-scooping elula- Yenza ukungabinamthi okuqinileyo okulula ukususa.
● Ukulungelana nokusingqongileyo- ivelisa ivumba elithozamisayo nangona ichama ikati kwaye ishiya imeko ye-eco-friendly.
● Ukunciphisa umkhondo, gcina ikhaya licocekile
Inkunkuma yekati yokutya ye-tofu yenziwa ngeembotyi zesoya zendalo kwaye iyenziwa ngokusebenzisa itekhnoloji ekhokelayo kunye neyomisa ngokukhawuleza, inobuhlobo kwindalo, ayinazo izongezo zemichiza, kwaye ithintela isithintelo samathumbu xa ikati yakho iginya.
Iimpawu zokulwa umkhondo zenza ukuba kube lula ukucoca! Inkunkuma yekati i-Tofu yenziwe ngamasuntswana afunyanwa kwisityalo esingafakwanga intonga kunye nefomula yokuqinisa ekhethekileyo enceda ukwenza iziqhu ezincinanana nezomeleleyo ngokwenza oko kube lula ukukha. Abanini bekati baya kuqaphela ukulandela umkhondo okuncinci kwaye iikati ziya kukonwabela ukuthungwa okungahambelaniyo okulunge ngakumbi kwiinyawo zazo ezibuthathaka.
Yenye yeenkunkuma ezikhethwayo kakhulu zekati ngenxa yezinto ezinobuhlobo kwindalo esingqongileyo ezinje ngeembotyi zembotyi kunye nombona wesitatshi. Idityaniswe nemithombo yokuncamathelisa imifuno kunye neziyobisi deodorant emva koko yenziwa kwisanti yekholamu. Ngokungafaniyo nenkunkuma yeClay okanye iSilica, inkunkuma yekati yeTofu iyi-100% kwizinto ezinokuboliswa ziintsholongwane oko kuthetha ukuba kukhuselekile ukugungxula indlu yangasese okanye kusetyenziswa isichumisi segadi.
Wena nekati yakho nichanabeke ekuphefumlweni ngothuli olusuka kwiidongwe zodongwe, kwaye yintoni embi? Ikati yakho iyayitya nayo xa icoca iinyawo zayo kwaye yabelana ngokwanga nawe! Ngokungafaniyo nodongwe okanye i-Silica litter, inkunkuma yekati yeTofu yenziwa nge-100% yeembotyi zembotyi (iimveliso ze-tofu). Ayisiyonto yasimahla yeMichiza kuphela, kodwa iza nolawulo lwevumba olungoyisekiyo. Ifunxa umchamo kwaye yome inkunkuma eqinileyo ukuze ilawulwe ngcono nge-5x kune-litter yodongwe.
Egqithileyo Inkunkuma yekati
Okulandelayo: Inkunkuma yekati ye-tofu